Travel Archives | Kingdom of news
ရေမြှုပ်နေတဲ့ စေတီတွေရှိရာ စံကားမြို့
ကမ္ဘာပေါ်က တမူထူးခြားတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ အကောင်းဆုံးနေရာများ
ဒီတပတ်မှာတော့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေ အတွက် ကမ္ဘာပေါ်မှာ တမူထူးခြားရှိနေတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ကောင်းတဲ့ နေရာများ အကြောင်းကို ဗဟုသုတရစေဖို့ တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ Diggerland ဒါကတော့ England နိုင်ငံရဲ့ ဒေါင့်လေးထောင့်ဖြစ်တဲ့ Kent, Yorkshire, Durham...
ဒီအပတ်မှာတော့ KON ကနေ စာဖတ်သူပရိသက် အပေါင်းတို့အတွက် ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ကောင်းမယ့် ကမ္ဘာ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ရေလွှာ လျှောကြီး (၈)မျိုး အကြောင်းကိုဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁။ ကီလီမန်ဂျာရိုး ရေလွှာလျှောစီး ကီလီမန်ဂျာရိုးဆိုတာ အာဖရိကတိုက်မှာ ရှိတဲ့ မီးတောင်ဟောင်းတခုရဲ့...
ကိုဗစ်ကာလ ပြီးသွားခဲ့ရင် အလည်သွားဖို့ အကောင်းဆုံးနေရာများ
အခုလိုကာလမှာ ကိုဗစ်ကြောင့် တစ်ကမ္ဘာလုံး အလည်အပတ်ခရီးစဉ်တွေ ရပ်တန့်လို့ စိတ်ကူးထဲက နေရာတွေဆီ ခြေမဆန့်နိုင်ဖြစ်နေကြပါတယ်။ သင်တို့လည်း များသောအားဖြင့် အိမ်ထဲမှာ နေပြီး ကိုဗစ်ကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ ကာလတစ်ခုကို စောင့်ဆိုင်းနေကြလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီတော့ ကိုဗစ်ကာလအလွန်မှာ ခရီးသွားဖို့...
Ngwe Saung beach is located on the Pathein City. When I have honey moon with my wife, we go to...
Bagan is one of the most ancient city in Myanmar. Bagan is visited by many tourists every year. Most famous...
How cheap is it? Cable car ice worth over $10 rides paragliding It was only $40 helicopters on the frozen...